Madaxweyne Siilaanyo Iyo Muuse Biixi: Siyaasiyiin Saaxiibtinimadoodu Laba Boglayso Iyo Waayaha Maanta | Haatuf Media Network
Hargeysa, rx December 19, capsule 2015 (Haatuf) – Marka aan raad-raac dheer la samayn ee la isku koobo jiritaanka xisbiga KULMIYE, unhealthy Madaxweyne Siilaanyo iyo Muuse Biixi waxa ay isla soo mareen waayo siyaasadeed oo macaan iyo qadhaadhba lahaa.
Waxa uu khilaafkoodii u weynaa bannaanka u soo baxay wakhtigii uu furamayay shirkii golaha dhexe ee KULMIYE ee 2009, markaas oo shirkaas oo Burco lagu qabtay lagu doortay Axmed Siilaanyo iyo Cabdiraxmaan Saylici. Waxaana mar qudha lagu war helay Muuse Biixi oo aan ka mid noqon weftigii la canadian viagra socday Axmed Siilaanyo ee Burco gaadhay isagoo ku hadhay caasimadda Hargeysa, ka dib markii ay isku maandhaafeen damac siyaasadeed oo la sheego in Muuse Biixi u mexico cialis no prescription'>mexico cialis no prescription soo bandhigay Madaxweyne Siilaanyo.
Muuse Biixi Cabdi, ayaa ololihii doorashadii 2010 qayb libaax ka qaatay sidii uu Madaxweyne Siilaanyo uga guulaysan lahaa Madaxweynihii uu la tartamayay ee Daahir Rayaale Kaahin oo doorashadii 2003 kaga guulaystay. Muuse wuxuu sameeyay wax kasta oo ay niyadiisu u arkaysay inay keenayso in Siilaanyo noqdo madaxweynaha Somaliland, waxaanu subixii loo dareeray doorashadii 2010 madaxweyne Siilaanyo gurigiisa kaga soo qaaday baabuur uu watay oo uu ku keenay guriga shaqaalaha oo ay inta badan siyaasiyiinta Somaliland ka codeeyeen. Hase yeeshee saaxiibtinimadaas oo ahayd mid siyaasadeed waxa ay wiiqantay markii uu Madaxweyne Siilaanyo guulaystay ee uu gebi ahaanba ka tallo qarsaday saaxiibkiisii siyaasadda ee halganka siyaasadeed la online cialis soo galay oo aanu ka tallo gelin dhismihii xukuumadda, waxaana markiiba soo baxday Madaxweyne Siilaanyo oo hoggaankii xisbiga ka reebay xukuumadii uu soo dhisay, taas oo sabab u noqotay in Muuse Biixi is buy levitra tuso in Madaxweyne Siilaanyo uu u arko si ka’ duwan sida uu isagu u arkayey Madaxweyne Siilaanyo.
Laakiin Madaxweyne Siilaanyo oo u muuqda inuu Muuse Biixi tusayo inaanu ka guurin, ayaa ku wareejiyay guddoomiyihii xisbiga KULMIYE, ka dib kulan ay bilo ka dib ku yeesheen xarunta madaxtooyada, waxaana la qabtay xaflad markhaati laga wada noqday oo Muuse Biixi loogu cumaamaday guddoomiyaha xisbiga KULMIYE oo markaas ahaa guddoomiye aan wow)) generic viagra professional rasmi ahayn maadaama oo aan lagu dooran shirweynihii.
Waxase markaas lagu wareejiyay kursiga Muuse Biixi u muuqatay in fursad uu muddo dheer sugayay ay bidhaanteedii hadda u we like it viagra pills soo muuqatay, laakiin bidhaantaas waxa xigay jarar iyo boholo siyaasadeed oo ay ugu horaysay sidii uu Madaxweyne Siilanyo ugala shaqayn lahaa in shirweynaha xisbiga si rasmi ah loogu doorto guddoomiyaha xisbiga, taas oo marka ay dhacdo u noqonaysa fursad wanaagsan.
Hase yeeshee wakhti yar oo kooban ka dib waxa Muuse Biixi si lama filaan ah loogu qanciyay inuu cadeeyo inaanu Madaxweyne Siilaanyo la tartamayn sidaasna uu kaga noqday hankiisii uu soo bandhigay. Waxaanu Muuse Biixi kulan uu la yeeshay Madaxweyne Siilaanyo ka dib jeediyay khudbad ka cadhaysiisay qaar badan oo ka mid ahaa taageerayaashiisa oo maalintaas u hauts-sarts.be qaatay in Muuse Biixi sidaas kaga siibtay salaankii siyaasadda islamarkaana uu guuldaraystay geedi uu muddo dheer soo waday.
Si kastaba ha ahaate Madaxweyne Siilaanyo iyo Muuse Biixi, maanta waa saaxiib waxaanay u muuqdaa inay aad isugu soo dhawaadeen markii u dambaysay, laakiin dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan inaanay saaxiibtinimadoodu weli ahayn mid rasmi ah ee ay tahay mid ay dantu isku toshay. Waxase uu Madaxweyne Siilaanyo iyo qoyskiisuba hadda u muuqdaan inay ka go’antahay inay dhisaan Muuse Biixi Cabdi oo ay iyagoo gacmaha haya ku fadhiisiyaan kursiga madaxtinimada Somaliland, waxaana dad badan arkaan inay waayo badan oo ay isla soo mareen ka dib hadda u eeg tahay inay jaanta isla heleen, waase haddii aanu Muuse Biixi halis gelin turubka siyaasadeed ee uu ciyaaro oo marar badan oo hore gayaysiin gaadhay inuu saaxadda ka baxo. Source:Wargeyska Geeska.